IApartment yokuphefumla eOceanfront-Net Hier - I-Airbnb
IApartment yokuphefumla eOceanfront-Net Hier
Stormsrivier, Eastern Cape, eMzantsi Afrika
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguJoubert
Chitha iholide engalibalekiyo kwiflethi yethu engaselunxwemeni kwenye yeemfihlo ezigcinwe kakuhle eMzantsi Afrika ecaleni konxweme. Yonwabela ukujonga okuphefumlayo kwe-180 degree kule ndlu iphambi kolwandle. Eli gumbi linelanga, lisanda kulungiswa linazo zonke izinto ezifunekayo ukuze uhlale phantsi, uphumle kwaye uthande ulwandle oluyimfihlo lwabucala. Le ndawo yokuchithela iholide inexabiso elingange-1 km leelwandle zabucala ezinesanti, amachibi endalo anamatye, imingxuma elithoba yegalufa erhabaxa kunye neendlela ezintle zokukhwela intaba.
Le ndlu yabucala ixhotyiswe ngokupheleleyo yi-80m² ngobungakanani bokulala 6 kwaye inamagumbi okulala amathathu, ikhitshi evulekileyo yeplani / igumbi lokuhlala kunye namagumbi okuhlambela amabini. Igumbi lokulala elikhulu libonelela ngebhedi ephindwe kabini enembono yolwandle ngelixa igumbi lesibini lineebhedi ezimbini ezingatshatanga kwaye elesithathu lixhotyiswe ngebhedi ephindwe kabini. Ikhitshi esandula ukulungiswa inesitovu se-Smeg, i-air fryer kunye nomatshini weNespresso. Nceda ukhumbule ukuza neepod zekofu kunye/okanye isepha kumatshini wokuhlamba.
4.59 · Izimvo eziyi-28
Ime kumda wonxweme lwaseMpuma Koloni, i-Eersterivierstrand perches phezu kwamalwandle acocekileyo, angonakaliswanga apho unokonwabela ukuqubha, ukuloba, ukuntywila emanzini, ukuntywila emanzini, okanye ukuphumla nje imida emide yesanti emhlophe.
Apha, embindini weTsitsikamma, eMpuma Koloni, i-Eersterivierstrand ikude nesihlwele esiphambeneyo - eyona ndawo iphambili yokuphuncuka kweMpuma Koloni, apho izandi ezithomalalisa umphefumlo zamaza aqhekezayo elunxwemeni ziya kukunceda uphumle kwaye uphumle.
Kwindawo ethe qelele yaseMpuma Koloni e-Eersterivierstrand, uya kufumana indawo yokuhlala yase-Eersterivierstrand yabucala e-Eersterivier Self-Catering, ekwindawo ekhuselekileyo, apho ama-bushbuck azulazula khona kwaye izilwanyana kunye nezityalo zisekwimeko engekachukunyiswa. Enye indawo yokuhlala etofotofo i-Eersterivierstrand e-Heaven-on-Sea ilele phantsi kwemithi yemveli emhlophe yobisi etyebileyo ngeentaka.
Umthandi wegalufa uyakonwabela iKlabhu yeGalufa iFynbos, umgama nje ongama-2.6km ukusuka eMpuma Koloni e-Eersterivierstrand indawo yokulala. Eli bala leGalufa laseMpuma Koloni liphawulwa ziibhokisi zetiye ezichazwe kakuhle, iindawo zokumisa ezinemigangatho, kunye neebhankethi ezikhusela uhlaza oluphangaleleyo. Kwisiza uya kufumana i-salon yobuhle, i-hairdresser kunye nevenkile yokutyela.
Ukuze utshintshe isantya, thatha uhambo oluyonqena ukuya eMpuma Koloni, eKareedouw (21.6km ukusuka kwindawo yokulala yase-Eersterivierstrand), kwaye indawo yokumisa efunekayo endleleni yindlela eyaziwayo, ethethwa kakhulu nge-Oudebosch Farmstall Tsitsikamma - 'indawo yokumisa enye' ezona ziqhamo zintsha, imifuno, izonka kunye netshizi ziyafumaneka. Yonwabela i-lemon meringue emnandi, i-milk tart kunye neekeyiki zetshizi ezikhethekileyo ezenziwe ekuhlaleni kwiSitolo seKofu kunye neGadi yeBeer, apho ungahlala esituphini kwilanga lasehlotyeni ngeglasi epholileyo yewayini okanye ibhiya.
Ngena ku-R62, kwaye umgama nje oziikhilomitha ezili-10 uya kufika eMpuma Koloni, iKareedouw ilele phakathi kweentaba ezintle zaseTsitsikamma kunye neZuuranys. Ijikelezwe yintlambo yamabhoma eziqhamo, iintaba ezintle kunye nemisinga yentaba ehlala ihleli, indawo eyoyikekayo yaseMpuma Koloni, iKareedouw liphupha labafoti. Lo mmandla uchumileyo waseMpuma Koloni ubonelela abakhenkethi ngeentlobo ngeentlobo zezinto ezithandwayo zangaphandle eziquka ukukhwela i4x4 ukutyhutyha iSuurveld, iKouga kunye neMpuma Koloni iBaviaanskloof Wilderness imimandla, ukuhamba ngephenyane kumlambo iKouga, ukukhempisha, ukukhwela intaba kunye neendlela zamahashe, kunye nokhenketho lwezithuthuthu ezikhokelwayo. iRoute 62 eyaziwa kakhulu enqumla eLittle Karoo ukuya eBhayi.
Ukufumana enye indawo yokuhlala yaseMpuma Koloni, iStorms River / iTsitsikamma imi malunga ne-31.8km emazantsi e-Eersterivierstrand. Lo mmandla womlingo waseMpuma Koloni usoloko uchazwa njengelizwe elimangalisayo ngenxa yobuhle bawo, apho abakhenkethi bakhe bathandeka bubuhle bembonakalo yaselunxwemeni lwaseMpuma Koloni - ulwandle oluqengqelekayo olunamazambuku amakhulu, agqobhoza unxweme; imilambo emihle ejikajikayo ukusuka kwithafa laseMpuma Koloni ukuya kutsho kuLwandlekazi lwaseIndiya; iintaba eziphakamileyo; kumatye anqabileyo, namahlathi agqunywe ngekhaphethi yefynbos eethe-ethe.
Umlambo iStorms River/ Tsitsikamma eMpuma Koloni ummandla waziwa kwihlabathi jikelele njengendawo yabafoti, abakhenkethi kunye nemidlalo yasemanzini, enabantu abaninzi abanomdla abakhoyo- hamba unxweme lwaseMpuma Koloni olumagqagala, ibungee jump isuka kowona mtsi uphakamileyo webungee, zipline ukunqumla iKruis. Umlambo, iingxangxasi ze-abseil Tsitsikamma, zintywila phakathi kookrebe, nokunye okuninzi.
Umbuki zindwendwe ngu- Joubert
Iindwendwe zamkelekile ukuba ziqhagamshelane nomnini buqu nge (PHONE NUMBER HIDDEN) ngayo nayiphi na imibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Stormsrivier